अधुरै रहेका ती घोषणा : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारअधुरै रहेका ती घोषणा
संविधानसभाबाट निर्मित संविधानपश्चात् भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पूरा कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएन । कारण जेसुकै होस्, बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि बनेको पहिलोप्रतिनिधि सभाले पनि असमायिक मृत्युवरण गर्न पुगेकै हो । त्यहीँ प्रवृत्तिलाई पछाउँदै कालखण्डमा मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई मात्र होइनन् झन्डै दुइ तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरी बनेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेतले विगतकै पदचाप पछाउँदै प्रतिनिधि सभालाई असमयमा नै भंग गर्नपुगेको विगत र वर्तमान दुवै हाम्रासामु छ । सरकार आगामी कात्तिकमा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई अन्यथा आदेश नदिएको खण्डमा मुलुक निर्वाचनको अध्यायमा जाने यकिन भइसकेको लगभग पक्का छ ।
तीन वर्षअघि सम्पन्न पहिलो आमचुनावमा सबै राजनीतिक दल संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी आमनिर्वाचनमा जान पाएकोमा फुलेल थिए । यहाँसम्म कि संविधानप्रति बिमति राखेको राजपा र राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको एजेन्डा परित्याग गरि नसकेको राप्रपासमेत उत्साहपूर्ण रूपमा चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धामा थिए । चुनावमा भएको बामतालमेल र चुनावपछि एमाले र माओवादीबीचको एकताले नेपालप्रति चासो राख्ने मुलुकको ध्यान तानेको थियो । प्रतिपक्षी वामको यो एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । राजनीतिक स्थिरता र खिचडी सरकारबाट उन्मुक्ति त्यतिबेला सबैको खुसीको विषय थियो । यो एकता र मेलमिलापबीच वामसरकार आशालाग्दो रूपमा उदाएको थियो । जनताले वामलाई सरकार बनाउन र नेकालाई प्रतिपक्षीमा बस्न दिएको जनादेश सबैले पालना गरेका थिए । इतिहासमा नै पहिलोपटक दुुई तिहाइनजिकको बलियो सरकार र भलादमी प्रतिपक्षीको एकैसाथ मिलन नेपालको संसद्को सुन्दर पक्ष थियो । तर, सेक्सपियरको दुखान्त नाटकमाझैं यो एकतामा प्वाल पार्न धमिरा प्रवेश गरे । दिन बित्दै जाँदा कहिले स्थायी कमिटी, कहिले महाधिवेशन समिति त कहिले केन्दीय समितिका नामबाट विरोध, बेमेलका स्वर आए । अन्ततः ती स्वर विस्फोटमा परिणत भए । एक भएको पार्टी आफ्नै कारणले पहिलाको अवस्थामा पुग्यो । अदालत त निहुँ मात्र थियो । आफ्नै अनिच्छाले एकीकृत पार्टी पुनर्मुसीको भवः भयो । पार्टी एकता गर्दाका वाचा त परै जाउन् चुनावी वाचासमेत पूरा भएनन् ।
लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम मानिन्छन् । यसैले पनि होला कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकले बेलाबेलामा गर्ने महŒवपूर्ण निर्णयमा जनता के चाहन्छन् भनी जनमत संग्रहमा जाने गरेकोे पनि पाइन्छ । महŒवपूर्ण विवादमा जनमत बुझ्ने÷ लिने चलन हामीकहाँ अद्यापि चलिसकेको छैन । राप्रपा र अन्य दलका केही नेताहरूले राजा र धर्मका लागि आज पनि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने कुरा दाहो¥याइराखेका छन् । तर, संविधानले नै टुंगो लगाइसकेको हुँदा यी एजेन्डा अब छलफलका लागि ग्राह्य मानिँदैनन् । बरु नयाँ नयाँ वा थपघट गर्नुपर्ने कुनै एजेन्डा भए जनमत संग्रहको विकल्पमा आवधिक चुनावमा तिनलाई घोषणापत्रमार्फत सम्बोधन गर्ने र जनताले ती एजेन्डालाई अनुमोदन गरी बहुमत दिएको खण्डमा सरकारको नेतृत्व गरी कार्यान्वयन गर्ने सहुलियत सबै राजनीतिक दललाई प्राप्त छ । संविधानमा किटान गरिसकेको विषयमा अब जनमत संग्रह वा अर्को लफाडाबाजीभन्दा यो उपाय नै उत्तम हो ।
चुनावी घोषणा जनता झुक्याउने खेल मात्र हुन् कि वास्तविकतामा पूरा गर्ने खालका हुन् भनी विचार गर्न जरुरी छ
तर, त्यो घोषणापत्रअनुरूप काम भए, नभएको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी भने हामीकहाँ छैन । आवधिक समीक्षाको सुविधा छैन । यसैले हामीकहाँ घोषणा पत्र एकातिर र काम गराइ अर्कोतिर हुन गएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि पहिलो संविधान सभा चुनावमा जनताले पाँच वर्षभित्र संविधान दिन्छांै भन्ने राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेरेर मत दिए । तर, विजयी दल र तिनका उम्मेदवार सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लागे । दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान त दिए तर अनावश्यक रूपमा म्यादी र तमसुकी सरकार गठन गरी राज्य चलाए । जनताले सरकार परिवर्तन गर्न जनादेश दिएका भने थिएनन् । यसैले जनताको म्यान्डेटलाई सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन नसक्ने दल निकम्मा नै हुन् र आवधिक निर्वाचनमार्फत् तिनलाई ठेगान लगाउनैपर्नेहुन्छ ।
खेर गएका वाचा
चुनावका लागि हरेक राजनीतिक दलले आगामी पाँच वर्षमा आफूूले गर्ने महŒवपूर्ण कार्यको फेहरिस्त चुनावी घोषणापत्रका माध्यमबाट प्रकट गर्ने चलन छ । अघिल्लो चुनावमा पनि दलहरूले यो कर्मकाण्ड पूरा गरे । घोषणा जनता झुक्याउने खेल मात्र हुन् कि वास्तविकतामा पूरा गर्ने खालका हुन विचार गर्न जरुरी छ । खासगरी चुनावी रस्साकस्सीमा अघिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमाले, माओवादी (केन्द्र) सम्मिलित वाम गठबन्धन चर्चाको चुचुरोमा थिए । बाँकी यी गठबन्धनमा नसमेटिएका दलका पनि आआफ्ना चुनावी वाचा थिए नै । हरेकका घोषणापत्र निस्केकै थिए । खासगरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्र्रेसले घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको आकार १० वर्षमा १ सय खर्ब पु¥याउने, आगामी ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, वार्षिक ५ खर्बसम्मको विदेशी लगानी भिœयाउने, १० वर्षमा गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य राखेको थियो । हरेक नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, औसत आयु ७७ वर्ष पु¥याउने, प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक भिœयाउने, पर्यटकीय सहरलगायत अन्य सहरमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेलगायत उद्देश्य नेपाली कांगे्रसको घोषणापत्रमा समावेश थिए । त्यस्तै सुविधा सम्पन्न द्रुतमार्ग निमार्ण गर्ने, १० वर्षभित्र पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, ५ सय किलोमिटरभन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजारभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएका थिए ।
दलहरूका घोषणापत्रमा राखिएका नीति तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन
वाम गठबन्धनले पनि आफ्नो संयुक्त घोषणापत्रमा १० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, गाउँटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी, पाँच वर्षमा देशभरि निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, तीन वर्र्षिभत्रमा राजधानीमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै, पाँच वर्षमा राजधानीको चक्रपथमा रेल तथा मोनोरेलको व्यवस्था, नेपालको ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन, १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भिœयाउने, दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको थियो । त्यसैगरी, उसले पूर्वपश्चिम राजमार्ग कम्तीमा ६ लेनको बनाएर स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउने उद्योगधन्दा खोलेर स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेलगायतका योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
जनताले वाम घोषणापत्र रुचाए । उसैलाई जिताए । तर, जनताको मतलाई उसले सुरक्षित राख्न सकेन । अहिले मिलिजुली सरकार बनाउने कमिक देखिँदै छ । जनताको मत यो थिएन । सरकार बनाउन आदेश पाएकाहरू टुटेर, फुटेर, चोइटिएर विभाजन हुने र प्रतिपक्षीमा बस्न आदेश पाएकाहरूले मिलिजुली सरकार बनाउने तरिका कृत्रिम हो । जसका कारणले होस्, अहिले यही कृत्रिमताको रिहर्सल भइरहेको छ । यसलाई छल्न प्रतिनिधि सभा भंग गरी आमनिर्वाचनको विगुल फुकिएको छ । यो पनि नाच्न जान्दिनँ आँगन टेढो भनेजस्तै हो । जनमतलाई सही तवरले परिचालन गर्न नसक्नेहरू फेरि के भनेर मत माग्न जाने हो ? भोलि पनि आजैको नियति दोहोरिँदैन भन्ने कुनै आधार छ र ? लगभग आजभन्दा ४० वर्ष पहिलेदेखिकै रोग आज पनि बल्झिएको छ । भोलि यसको अन्त्य भइहाल्छ भन्ने कुनै आधार छैन ।
सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय )मा विस्तारित छन् । सिंहदरबारको अभ्यास गाउँगाउँमा हुन थालेकोे छ । समावेशीतालाई व्यवहारमा उतारिएको छ । महŒवपूर्ण पदमा लैंगिक सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ । यसैकारण परम्पराकाबीच अघिल्लो चुनाव हरदृष्टिले नयाँ थियो । फरक थियो र हरेक पक्षबाट हेर्दा प्रगतिशील पनि । यसैले पनि सो चुनावमा सद्पात्र, सद्विचार र सद्प्रवृत्तिले जित्नुपर्छ भन्ने आमचाहना थियो । तर व्यवहारमा उनीहरूको काम यस्तो देखिएन । खासगरी गणतन्त्रको प्राप्तिपछिका चुनाव (२०६४, २०७० र २०७४ ) मा दलहरूले पेस गरेका घोषणापत्र एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुँदा कतै चुनाव आउँदा घोषणापत्र पेस गर्नुपर्ने कर्मकाण्डीय पद्धति पूरा गर्न मात्र त पेस गरिएको होइन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
घोषणापत्रमा राखिएका दलहरूका नीति तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, भएनन् । हामीकहाँ चुनावको बेला जे पनि हुन्छ, गर्छौं भन्ने चुनावपछि फर्केर नचियाउने प्रवृत्ति पनि हावी छ । जनता पनि विगतका वाचा कति पूरा भए कति भएनन् भनेर सोधखोज वा समीक्षा गर्न चासो राख्दैनन् । यसैकारण कर्मकाण्डी नभै पूरा गर्ने हेतुले आएका घोषणापत्र नै वास्तविक रूपमा मतदानका लागि योग्य मानिन्छन् बाँकी त्याज्य । विगतमा भनिएका स्थायी सरकार, शान्ति र अमन चयनका वाचा पूरा गर्न नसकेर नै अहिलेको यो अवस्था आएको हो । अब विगतमा फर्कने हो भने सत्तारूढ दलका ती घोषणाको औचित्य कहानेर रह्यो र ?
नगेन्द्रराज पौडेल - July 31, 2021
सप्तरीमा ३ सय भन्दा बढी घर डुवानमा